भारतीय जासुस र सेना प्रमुखपछि भारतिय प्रम मोदी नेपाल आउने तयारी के ‘ब्रेक थ्रु’ साचै होला त ? – Krazy NepaL
भारतीय जासुस र सेना प्रमुखपछि भारतिय प्रम मोदी नेपाल आउने तयारी के ‘ब्रेक थ्रु’ साचै होला त ?
November 9, 2020 727
काठमाडौै । नेपाल–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका बेला सुधारका प्रयासस्वरुप केही सांकेतिक कदमहरु चालिएका छन् । त्यसैअन्तर्गत एक वर्षदेखि रोकिएको भारतीय स्थल सेनाका प्रमुखबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ ।
भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यहाँको जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अरु केही नेताहरुलाई पनि भेटेर गएका छन् ।
यसअघि भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्टका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरी शुभकामना दिएका थिए भने त्यसको नतिजास्वरुप दुई देशका विकास आयोजना सहजीकरण संयन्त्रको भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बाहिर देखिने गरी भएका यी गतिविधिले दुवै देशको सम्बन्ध सुधार भइहालेको संकेत त गर्दैनन् तर त्यसतर्फ दुवै देश अभिमुख रहेका हुन् कि भन्नेसम्मको छनकचाहिँ दिन्छन् ।
हुन त नेपाल–भारत सम्बन्धमा जुन तहको समस्या ऐतिहासिककालदेखि साँचेर राखिएको छ, थुप्रिँदै थुप्रिँदै गएर निकै खराब परिस्थितिमा पुगिसकेको छ । त्यसैले तत्काल समाधान भइहाल्ने विषय पनि होइन । सन् १९५० को सन्धिदेखि सीमा अतिक्रमणसम्मका विषय भारत एकैपल्ट समाधानका निम्ति तयार हुन्छ भन्ने आधार पनि छैन । किनभने, विगतदेखि नै उसले नेपाली पक्षलाई वार्ता, बैठक र दुईपक्षीय संयन्त्रका नाममा अल्मल्याउँदै आइरहेकै छ ।
ओली सरकार अहिले सम्बन्ध सुधारको प्रयासस्वरुप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै नेपालमा स्वागत गर्ने तयारीमा लागेको छ । रअप्रमुख गोयल र सेनाप्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमण पनि त्यसैको तयारीस्वरुप भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यसो त उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालय खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नुको मुख्य कारण पनि यही रहेको बुझिएको छ । पोखरेलको झुकाव चीनतर्फ देखिएको भारतीय पक्षको गुनासो सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिइएको बुझिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा तनाव उत्कर्षमा पुगेपछि दुई देशको राजनीतिक तहमा संवादहीनता छ । यति मात्र होइन, कूटनीतिक तहका संयन्त्रहरु पनि निष्क्रियप्रायः छन् । यो अवस्था तोड्नका निम्ति सुरक्षातर्फका संयन्त्रबाट पहल थालिएको हालैका घटनाक्रमबाट देखिएको छ ।
राजनीतिक तहको संवादहीनता तोड्नका निम्ति हालै नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका दुवै सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखले पक्कै पनि दुईतिरका सरकार प्रमुखका सन्देश आदान–प्रदान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यी भ्रमण राजनीतिक तहको संवादहीनता तोड्नका निम्ति भएको बताएका छन् । साथै, गोयल मोदीको दूतका रुपमा आएको र दुवै तर्फको सन्देश आदानप्रदान भएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘दूतले निर्णय दिँदैन । दूतले त यताको सन्देश उता, उताको सन्देश यता पु¥याउने काम मात्र गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अहिले त्यही भएको छ ।’
अर्को एक अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नरवणेशको भ्रमणका विषयमा भन्छन्, ‘सीमा विवाद सेनाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । नरवणेलाई त्यो कार्यादेश पनि थिएन । तर, जहाँजहाँ द्विपक्षीय कुरा भयो, त्यहाँ सार्वभौम समानताका आधारमा भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले सुदृढ गर्न चाहन्छ । इतिहासले जे बाँकी राखेको छ समस्याहरु, चाहे सीमा समस्या होस्, चाहे १९५० को सन्धिलगायतका समस्याहरु हुन्, ती सबै वार्ताबाट समाधान भएको देख्न चाहन्छौँ । कूटनीतिक प्रक्रियाबाट यथाशीघ्र समाधान चाहेको सन्देश हामीले भारतीय नेतृत्वसमक्ष पठाएका छौँ ।’
१९५० को सन्धिसहित अहिलेसम्म भारतसँग भएका सन्धि, सम्झौता र कूटनीतिक पत्राचारदेखि अरु द्विपक्षीय समस्यामा रहेर दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दिएको प्रतिवेदन अलपत्र छ । नेपालले पटकपटक कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधानका लागि गरेको प्रस्तावमा भारत प्रतिक्रियाविहीन छ । बरु दुवै देशबीच कतिपय प्रसंगमा आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो ।
यही कारण दुवै देशका सेनाप्रमुखले पदभार ग्रहण गरेको एकाध महिनामै अर्को देशको सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्ने अभ्यास समेत प्रभावित भएको थियो । गत वर्षको नोभेम्बरमै पदभार ग्रहण गरेका नरवणे नेपाल आउन पाएका थिएनन् । उल्टै नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका कारण उनी विवादित भएका थिए । यसरी निकटका दुई छिमेकीबीच परम्परागत मैत्री सम्बन्धमै आँच आउने अवस्था बनिरहेका बेला दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्ध सुधारका सांकेतिक पहलसम्म गर्न तयार भएको देखिन्छ ।
मोदीको भ्रमणको वातावरण बनाउन ओलीका केही विश्वासपात्रहरु अहिले दिल्लीमा रहेको बुझिएको छ । यसपछि मोदीले कूटनीतिक र राजनीतिक तहका दूत पठाएर आफ्नो भ्रमणको वातावरण बनाउने सम्भावना बढेको छ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्ने र त्यस सन्दर्भमा केही उल्लेख्य समझदारी बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसअघि ओलीको भारत भ्रमणका बेला नेपालले राखेका अडानमा भारतीय संस्थापन सहमत नहुँदा संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुन सकेको थिएन ।
अहिले पनि आधारभूत रुपमा भारतले नेपालको अडानलाई हार्दिकतापूर्वक लिन सकेको छैन । फेरि हामीलाई उसको हार्दिकताभन्दा बढी सार्वभौम समानताको भावना चाहिएको हो । नेपालले आफ्नो भूमिमाथिको नियन्त्रण आफै गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दा त्यसमा चिनियाँ उक्साहट देख्ने भारतीय दृष्टिदोष छ ।
यो दोष रहेसम्म दुई पक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले भइरहेका सांकेतिक पहल पनि भारतले नेपाललाई अल्मल्याउने रणनीतिकै कडी हुन सक्छन् । जसरी नेपाली पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुने अपेक्षा गरेको छ, त्यो हदसम्म उत्साहित भइहाल्नु अलि हतारो हुने देखिन्छ ।
Prevफिङ्गर प्रिन्टबाट स्टार्ट हुने टीभीएसको पहिलो क्रुजर बाइक आयो
Nextआज सुनको कारोबार कतिमा हुदै छ ?प्रति तोला कति पुग्यो ? पद्नुस
घर गाउतिर पाइने कुरिलो जसलाई औषधिको रानी मानिन्छ यसको छन फाइदाहरु